स्वास्थ्य Archives - Sawal Nepal
के यो जाडोयाममा तपाईं पनि विवाह बन्धनमा बाँधिदै हुनुहुन्छ ? यदि हो भने आफ्नो अनुहारमा ग्लो ल्याउनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुहोस् । आजकाल ब्यूटीपार्लरमा विवाह अघि नै फेयरनेस ट्रीटमेन्ट सुरु हुने गर्छ । घरेलु उपायले नै विशेष ग्लो पाउन सकिए कति राम्रो हुँदो हो । विवाहको विशेष दिनको तयारीका लागि सबैभन्दा पहिले तपाईंले केही
एजेन्सी – धेरैजसो व्यक्तिहरु चिसो सुरु भएसँगै विभिन्न समस्याबाट पीडित हुने गर्छन् । सास फेर्न समस्या हुने, रुघाखोकी लाग्ने, कफ आउने, छातीमा समस्या हुने जस्ता समस्याबाट प्रायः सबैलाई चिन्तित बनाउँछ । यसका लागि सबै समस्यामा अलैँची खाने गर्नुपर्छ । यसका फाइदाहरुः १. मौसमी इन्फेक्शन अलैँचीमा एन्टिइन्फ्लेमेटरी, एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिमाइक्रोबियल जस्ता गुणहरु पाइन्छ । जसले स्वासप्रश्वास
एजेन्सी – बाहिरी मौसमको तापक्रम जस्तोसुकै भएपनि आफूलाई ‘हाइड्रेटेड’ राख्न र आफूलाई सक्रिय रहनका लागि पर्याप्त पानी पिउन आवश्यक छ । जुनसुकै मौसममा पनि पानी पिउन अत्यन्तै जरुरी छ । व्यायामसँगै पानीले पनि तौल कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । अहिल्यै पिउनुस् एक गिलास पानी ! छाला चम्किलो राख्न चिसो मौसममा छाला सुख्खा हुने र रुखो
झापाको दमक नगरपालिकाका थप २२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज थप ८ पु्रुष र १४ महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै दमकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या एक हजार ५७ पुगेको छ । जसमा ६ सय २८ पुरुष र ४ सय २९ महिला छन् । यद्यपी ७ सय ८४
नीममा रहेका गुणहरूले अनेकौं रोगको उपचार काम गर्छन् । यसका औषधीय गुणका कारण आयुर्वेदमा यसको प्रयोग हजारौं वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ । नीमलाई संस्कृतमा अरिष्ट भनिन्छ जसको अर्थ लाग्छ श्रेष्ठ, पूर्ण र कहिल्यै खराब नहुने । नीमका डाँठ, जरा, बोक्रा र फल सबैमा शक्तिवर्द्धक तत्व विद्यमान हुन्छन् अनि रोगविरुद्ध लड्छन् । यसको बोक्रा विशेषगरी औलो
नेपालीलाई दाल, भात र तरकारीसँग अलिकति अचार पनि चाहिन्छ नै । अचार स्वादिष्ट हुनाले खाना रुचाउन यसले मद्दत गर्छ । बट्टामा खाँदिएको अचार बजारमा सजिलै पाइन्छ । तर नियमित रूपमा अचार खाँदा यसले स्वास्थ्यमा हानि पु–याउँछ । स्वादिष्ट अचारका साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छन् । जानौं अचारले गर्न सक्ने हानिका बारेमा : मधुमेहमा हानिकारक मधुमेहका रोगीले
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौ । किन हुन्छ टन्सिल ? हाम्रो जिभ्रोको
चिसो मौसममा धेरैजसो मानिसहरु तातो खानेकुरालाई आफ्नो डाइटमा समावेश गर्ने कोसिस गर्छन् । जाडोयाममा एउटा खानेकुरा यस्ते छ जसलाई चिसो मौसममा धेरै नै रुचाइन्छ र धेरैभन्दा धेरै खानामा समावेश गर्ने कोसिस गरिन्छ । स्मरण रहोस्, गुड स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुनछ, यसमा अत्यधिक मात्रामा आइरन, भिटामिन सी, प्रोटिन, म्याग्नेसियम र पोटासियम पान्छ जसले हामीलाई स्वस्थ
दमक। झापाको दमक नगरपालिकामा आज थप २७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज दमकका १६ पुरुष र ११ महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नगरपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव कुबेरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार योसँगै दमकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या एक हजार ३५ पुगेको छ । यद्यपी ६ सय ९०
शरीरमा आइरन र रगतको कमी पूरा गर्नका लागि अनार निकै राम्रो स्रोत हो । त्यसैले चिकित्सकहरुले अनार खान सुझाव दिन्छन् । अनार फाइबरले भरपुर हुन्छ । यसले तौल कम गर्छ । तर, केही व्यक्तिहरुका लागि अनार खानु खतरनाक हुन्छ । १. एलर्जी एलर्जीबाट समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले अनार खान हुँदैन । यसले एलर्जीको समस्या झन् बढाउँछ